TTSweet: ကြက်ကင် သံဝေဂ ...
Posted by T T Sweet at 5:43 PM
ko9September 24, 2012 at 9:42 PM
ဟုတ်ပဗျာ...ဝန်ထမ်းမိသားစုဆိုတော့ အသားနဲ့အရိုးတွဲယူ၇တာ ဘဲဥဆို၇င်တခြမ်းပဲ၇တာ
ဘူးသီးတောထဲကြက်ရိုးဖြတ်ပြေးတာ တို့ သတိ၇မိပါ၇ဲ့...
AMK September 24, 2012 at 10:20 PM
တီဆွိ "အလ္လာပ သလ္လာပ by T T Sweet" ကဘယ်မှာ သွားဖတ်ရမှာလဲ google reader မှာ တော့ ခေါင်းစဉ်ပဲပေါ်တယ် နှိပ်လိုက် ၇င် ပို့ မရှိဘူးတဲ့ 
မေဓာဝီ September 24, 2012 at 10:28 PM
တီတီဆွိရေးမှ သမ၀ါယမခေတ်က အစားအသောက် အသုံးအဆောင်တွေ ရှားပါးခဲ့တာ အမှတ်ရမိတယ်။
အဲတုန်းကတော့ သမလူကြီးတွေ တန်ခိုးထွားတဲ့ခေတ် ပေါ့နော်။
အဲဒီတုန်းက အပေါ်က အနောနိမတ် ပြောသလိုပဲ ပန်းသီးလေးတလုံးကို ရှားတောင့်ရှားပါး စားခဲ့ကြရတာ။
ခုတော့ မစားနိုင်လို့ လွှင့်တောင်ပစ်ရတယ် ...
ဘာဂါဆိုလဲ အဲလိုပဲ ...
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက ဘာဂါဆိုင်မှာ တခါတလေမှ ၀ယ်စားနိုင်တာ။
အင်း ... ခေတ်တွေက ပြောင်းလဲသွားတာလား ... အခြေအနေက ပြောင်းလဲသွားတာလား ...
တီတီဆွိဦးလေး အဖြစ်ကတော့ သံဝေဂရစရာပါ ... ။
ကျနော်ကကျတော့ ငယ်ငယ်က ဆနွင်းမကင်း တအားကြိုက်တော့ ငါအသက်ကြီးလာရင် တစ်ဗန်းလုံးဝယ်၊ မလှီးဘဲ ဇွန်းတပ်ပြီး စားပစ်မှာလို့ စိတ်ထဲ ကြိမ်းဝါးခဲ့ဖူးသေးတာ။ (အခုလဲ ရွှေပုဇွန် တစ်ဗူးဆို နှစ်ခါစားပါပဲး) )
T T Sweet September 24, 2012 at 11:55 PM
အဲဒီပို့စ်က ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး Enter မှားခေါက်လိုက်တာ ပို့စ်က တက်သွားတာ။ ဘာမှတောင် မရေးရသေးဘူး။ ဒါနဲ့ ကမန်းကတမ်းဖျက်လိုက်ရသေးတယ်။ စာကပထမတော့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းထွေရာလေးပါးလေးတွေ ရေးမလို့ဟာ ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီ ကြက်ကင်နဲ့တင် ရှည်သွားလို့ အဲဒါပဲ ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး ရပ်လိုက်ရတော့တယ်။ မရေးဖြစ်ရင်လဲ တော်ရုံနဲ့ မရေးဘူး။ ရေးတော့လဲ အန်တီဆွိဟာ အင်မတန် လျှာရှည်လှသဗျ။
ပန်းသီးကတော့ ဟုတ်တယ်။ အဘွားနေမကောင်းတော့ အမေတို့က ၀ယ်ကျွေးတာ နဲနဲလေး စားရတာ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာ။ စလုံးမှာတုံးက ၀ိတ်ချတော့ ရုံးမှာနေ့လည်စာ ပန်းသီးတစ်လုံးပဲ နေ့တိုင်းစားတာ။ ကြာလာတော့ ပန်းသီးကို ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ ပန်းသီးမြင်ရင် ကြက်သီးတောင်ထတယ်။ မစားချင်လို့း)
အန်တီဆွိလျှာရှည်တာကိုဘဲစောင့်ဖတ်နေတာဗျို့ အလ္လာပ သလ္လာပ ကိုရှာလိုက်ရတာ အခုမှဘဲသိတော့တယ် သီတာ
ငယ်ငယ်ကလေ အမေက ကြက်ကောင်လုံးပေါင်းလုပ်ကျွေးတာ
အရမ်းကြိုက်တော. မောင်နှမတွေ ခွဲစားရတာ အာသာမပြေဘူးလေ
ငါကြီးလာလို. အလုပ်ရရင် ကြက်ကောင်လုံးပေါင်းပြီး
အခု စလုံးမှာ ကြက်သားများမုန်းလွန်းလို.
အစားအစာတွေက အဲလိုပဲ မဝတဝမှ စားကောင်းတယ်
အန်တီလေးမေခင် September 26, 2012 at 12:38 AM
မြတ်နိုးသူ(MUFL) September 26, 2012 at 12:42 AM
တီဆွိဘုရားလူကြီးဘ၀နဲ့ ဘ၀ကို ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဦးလေး ကြက်ကင်တောင်မှ စားနိူင်ပါဦးမလား ... ကြက်ကင်တစ်ခု အရင်းပြု ဦးလေးရဲ့ အဖြစ်ကို သံဝေဂ ယူသွားပါတယ်
akmoe September 26, 2012 at 10:43 AM
အစ်မ ဆွီတီခင်ဗျာ .... လူ့ ဘဝရဲ့ အနိမ့်အမြင့်လောကဓံတရားကို သံဝေဂရပါတယ်။ ဗဟုသုတလဲရပါတယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။
Thu September 26, 2012 at 3:10 PM
စားရပါများလို့ ထုံနေလို့ တော်ရုံအရသာ ထိုးမဖောက်နိူင်တာ ဖြစ်လောက်မယ်ထင်ပါရဲ့။
Young time chemistry (sense) is strong enough to impact our mind.
So, nostalgia things are based on intense of chemistry.
T T Sweet September 26, 2012 at 10:28 PM
2:52 PM (7 hours ago)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) has leftanew comment on your post "ကြက်ကင် သံဝေဂ ...":
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြွေကျနေတဲ့ အသီးလေးတစ်လုံးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပြိုင်ကောက်တာ သူငယ်ချင်းက ရသွားတယ်။ အဲဒါကို မရလိုက်တဲ့အတွက် နှစ်အတော်ကြာ စိတ်ထဲ ဖျောက်မရဘူး... အိပ်မက်ထဲတောင် အဲဒီအသီးကို မက်မိတယ်။
ငယ်တုန်းကများ အသီးလေးတစ်လုံးမစားလိုက်ရတာကိုတောင် တနုံ့နုံ့ဖြစ်မိတာကို ပြောပါတယ်။ ငယ်တုန်းကများ ဘာလေး စားရ စားရ ကောင်းတယ်လို့ကို ထင်နေမိတော့တာ .. ခုများတော့ မျက်စိတ်ရှေ့ ရှိနေရင်တောင် စားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး .. စိတ်တွေလဲ အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ နိုင်သားနော်။.
mstint September 27, 2012 at 5:50 PM
သမဝါယမခေတ်ကို ပြန်သတိရမိတယ် စွိတီရေ။ ရေနံဆီ တစ်ပုလင်း ရတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ပျော်နေတား) ပစ္စည်းဆိုတာ ရှားမှတန်ဘိုးကိုနားလည်တာလေ။
မရေရာတဲ့ လောကဓံတရားရဲ့ ရိုက်ချက်ကို ကြက်ကင်တစ်ကောင်အရင်းပြုပြီး သံဝေဂလေးယူသွားတယ်။
Anonymous September 29, 2012 at 2:14 AM
Ama....ဒံပေါက်ချက်နည်း လေးလုပ်ပါအုံး...I saw photo on FB. Thanks
rose of sharon October 2, 2012 at 1:04 PM
ကြက်ကင်လေးနဲ့ အရွက်သုတ်လေးနဲ့မိုက်တယ်... ဒို့လဲငယ်ငယ်က ကြက်ကင်ဆိုတာ တခါတလေမှစားရတာ...း))
San San Htun October 5, 2012 at 1:32 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘိုစာတွေလည်းရှား၊ စာအုပ်တွေဆိုလည်း TIMES မဂ္ဂဇင်းစာရွှက်တွေနဲ့ဖုံးခဲ့ရတာ..ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ကံကောင်းကြတယ်..တီတီဆွိပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး သံဝေဂရမိတယ်..
T T Sweet October 5, 2012 at 5:07 PM
အနောနိမတ်စ် ... ဒန်ပေါက်ချက်နည်း ဓာတ်ပုံတွေတော့ ရိုက်ထားတယ်။ လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့ကွယ်။